FBC - Galmeen qoramtoota qormaata biyyaalessaa maarsariitiin kallattiin raawwatamaa jira
Galmeen qoramtoota qormaata biyyaalessaa maarsariitiin kallattiin raawwatamaa jira
Finfinnee, Gurraandhala 14, 2010 (FBC) Galmeen qoramtoota qormaata biyyaalessaa kutaa 10ffaa fi 12ffaa maarsariitiin kalattiin raawwatamaa jira.
Ejansiin Madaallii Qormaatilee Biyyaalessaa hojimaata galmee qoramtoota qormaata biyyaalessaa kutaa 10ffaa fi 12ffaa galmee maarsariitii yookiin intarneetii kallattiitti jijjiiruu dandeessisu jalqabuusaa beeksiseera. Wayita ammaas galmee qoramtoota qormaata gariin hojimaata haaraa kanaan galmeessuu jalqabeera.
Sirni galmee haaraa kun torban darbee jalqabee manneen-barnootaa sadarkaa lammaaffaa fi qophaa’insaa dhuunfaa fi mootummaa Finfinnee keessaa 152 keessatti geggeffamaa kan jiru yoo ta’u, magaalota gudguddoo tajaajilli intarneetii isaanii gaarii ta’e keessattis galmee kana jalqabuuf hojileen hojjatamaa jiru. Ejansii kanatti ‘Daayirektarri’ Galmee fi Qindeessa Qabxii Qormaataa Obbo Yooseef Abarraan manneen barnootaa 466 sirna haaraatti akka galan taasifamuusaa eeraniiru. Baatiiwwan shan darbanittis Finfinneetti barattoonni kuma 10 ol akka galmaa’an himaniiru.
Sirni galmee haaraa galmee waraqaa irratti taasifamuuf baasii ba’u hir’isuu fi dogoggoroota galmee waliin wal-qabatanii mudatan hambisuuf yaadamee kan qophaa’e ta’uu daayirektarichi himaniiru.
Itiyoophiyaan waraqaa gamee qoramtoota qormaata biyyaalessaa kutaa 10ffaa fi 12ffaa galchuuf tajaajila geejibaa fi daangaaf waggaa waggaan baasii Paawundii kuma 100 baasti.
Kana malees, adeemsa galmee waraqaan galmeedhaa jalqabee hanga waraqaa eenyummaa qormaataa isa dhumaa qopheessuutti hanga baatii sadii kan fudhatu yoo ta’u, sirna galmee haaraan garuu barattoonni galmaa’anii guyyoota keessatti waraqaa eenyummaa qormaataa akka argatan taasifama.
Haata’u malee, tajaajilli intarneetii amma jiru dadhabaa ta’uunsaa manneen barnootaa mootummaatti adeemsa galmee maarsariitii kana booddeetti hambisaa akka jiru himama.
Ogeessi ‘koominikeeshinii’ Itiyoo-telekoom Obbo Abdurraahim Mahaammad gamasaaniin rakkinichi dhaabbatichatti akka hin-gabaafamne eeranii, rakkoolee qulqulleeffannee furmaata nikennina jedhaniiru.
Galmeen kun hanga baatii Guraandhalaa dhumaatti akka itti-fufu ejansichi eereera.
Ejansichi bara barnootaa baranaadhaa jalqabee galmeen qoramtoota qormaata biyyaalessaa kutaa 10ffaa fi 12ffaa maarsariitiin akka ta’u ibsuunsaa kan yaadatamudha.
Oduuwwan Biroo « Preezdaantin Iikwaatooriyaal Giinii Oobiyaang Niigoomiyaa Baasoongon daawwii hojiif Finfinnee jiru	Dh.D.U.O Pireezdaantii Mootummaa FDRI duraanii Doktar Nagaasoodhaaf konkolaataa kenne »